Umunwe uwubhekisa kuHunt ngokwenzeka kwiChiefs
UGAVIN Hunt umqeqeshi weKaizer Chiefs eqale isizini yeDStv Premiership ngegiya eliphansi Isithombe: BACKPAGEPIX
INKAKHA eyayingunozinti kwiKaizer Chiefs eminyakeni edlule, u-Abel "Chacklas" Shongwe, igxeka umqeqeshi uGavin Hunt ngokugqoza kwemiphumela kuleli qembu.
UShongwe owafica kwiChiefs izinsephe ezifana noPatrick "Ace" Ntsoelengoe, Nelson "Teenege" Dladla, Trevor "KKK" Mthimkhulu, utshele Isolezwe ukuthi ayasabeka amaphutha enziwa uHunt emidlalweni yakamuva.
Ulinganise ngomdlalo odlule, abadlale kuwo ngokulingana neBloemfontein Celtic lapho uHunt eshintshe ngezitobha esikhundleni sokufaka abadlali abazohlasela.
Uqhube wathi angalinge acashe ngokuthi akakwazanga ukuthenga abadlali ngoba uyena siqu uHunt ohlulwa ukubophela isikimu ngendlela efanele.
"Ukhumbule ukuthi laba badlali uHunt adlala ngabo yibo u-Ernst Middendorp acishe wadla ngabo isicoco seligi ngesizini edlule. Ngesingami, uHunt ngibona kumsinda ukuqeqesha iChiefs. Kwesinye isikhathi uke avele abophele isikimu ngendlela exakile. Into eyenzeka kwiChiefs iyethusa manje, kumele kubekhona okwenziwayo ngokushesha," kubeka uShongwe.
Ebuzwa ukuthi usho ukuthini uma ethi kumele kubekhona okwenziwa ngokushesha, uthe:" Kanginawo amandla okusho ukuthi uHunt akakhonjwe indlela noma cha. Lesi yisinqumo sabanikazi beqembu. Okungiphatha kabuhlungu ukuthi kangiboni uHunt ekwazi ukulungisa lezi zinkinga ngokushesha.“
UShongwe owasayiniswa uTed "Makepisi " Dimitru ngo-1986 ephuma kwiMbabane Highlanders yangakubo eSwazini, uthe kulihlazo elisabekayo ukuthi iqembu elinjengeChiefs lisanqobe umdlalo owodwa kweyisishiyagalombili.
Inqobe oweChippa United kuphela. Ngaphambi kokubambana neSiwelele, beyishaywe iSuperSport United ngo-2-1. Kwi-log isendaweni ka-13 ngamaphuzu ayisikhombisa.
UShongwe owayengunozinti uqhube wathi okunye okuqapheleka ngabadlali baMakhosi wukuphelelwa wukuzethemba ngendlela exakile. Uthe iqembu seliyinhlakanhlaka, wonke umuntu wenza akuthandayo.
"Angazi noma ngithi badinga ukululekwa ngokomqondo noma cha. Abadlali beChiefs ubabona bengena enkundleni ukuthi ukuzethemba akusekho kubona. Kamuva-nje, lokhu kuboza kuhlasele ngisho onozinti. Ngiyaqala ukubona uKhune (Itumeleng) enza amaphutha asabeka ngale ndlela. Nakuye uyabona ukuzethemba kuphansi ngendlela emangalisayo. Abanye abadlali uyababona ukuthi sebezidlalela bona, akusabanjiswene njengeqembu".
Kusasa, iChiefs izodlala neCD Primeiro de Agosto yase-Angola kowokuhlungela amaqoqo eCaf Champions League. Umlenze wesibili uzoba ngoJanuwari 6.